Nkowasi: Advanced Task Manager nwere ike depụta niile na-agba ọsọ aga-eme, na ị nwere ike họrọ ụfọdụ igbu. Ọ na-nwere ngwa management ngwá ọrụ jikwaa niile arụnyere ngwa. A ngwa ga-enyere gị aka igbu ihe aga-eme, free ebe nchekwa, speedup ekwentị gị na-azọpụta batrị. Ọ na-akpaghị aka na-egbu ihe aga-eme oge ọ bụla gị na ihuenyo aga anya. Na mgbakwunye na, a na-eji ngwa na-abịa na a ngwa ngwa uninstaller na batrị faili.
N'ụzọ dị irè na-egosiputa na Njikwa Filiks
Akwụ ụgwọ a otutu ego; free nakwa nha uzo ozo dị
Windows abịa na a ọrụ njikwa. I nwekwara ike iji Usoro Explorer ma ọ bụ yiri ngwa ọdịnala na-free
Nkowasi: Android Booster bụ gị android nnyemaaka ọcha na-enwe gị smart ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Ọ ga-ebuli gị ngwaọrụ ke ụzọ kasị mma na ga-akpaghị aka melite Android usoro ịrụ ọrụ. Nnọọ, a na ngwa e ebudatara ọtụtụ nde ugboro, na ugbu a, ọ bụ maka free ke Play Store.
Uru: Free ngwa na-abịa na a dịgasị iche iche nke atụmatụ
Nkowasi: App Cache Cleaner bụ kemfe ngwá ọrụ nke ga ọcha ahụ cache gị niile ngwa. Nke a ngwa nwere onye taabụ cleanup atụmatụ na ike ọcha niile cached faịlụ maka eme ka ndị ọzọ ohere dị. Ngwá ọrụ a nwekwara ike onwe a otutu nchekwa na ebe nchekwa na ekwentị gị. Ọ bụrụ na ị na-agba nke ohere maka ngwa nchekwa, gị ugbu a nwere ike inwe ihe dị ohere site ekpocha ngwa kere cache / data faịlụ.
Uru: Interface nke ngwa bụ n'ezie mfe ma dị mfe iji
Cons: buru oke ibu na size na ya mere ngwa-erepịakwa otutu ohere ya onwe ya
4. Mmalite Manager Free
Nwere ike ikwu kpakpando: 2
Nkowasi: Mmalite Manager-enyere gị aka gbanyụọ ekwesighi usoro mmalite Ndenye mgbe ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba akpụkpọ ụkwụ. Ọ na Monitors na-egosi na ndepụta nke mmalite ngwa ọdịnala na ego. All na ị chọrọ ime iji gbanyụọ otu ihe site usoro mmalite bụ uncheck ngwa site na listi. I nwekwara ike re-enyere ndị ngwa ma ọ bụ ego iji otu mmalite Ndenye ndepụta. Ị pụrụ ọbụna uncheck niile mmalite Ndenye na nnukwu aka usoro mmalite ọsọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ nanị inwe ike a akpan akpan ngwa, nanị inwe ike ya na mmalite Ndenye.
Ọ bụ mụ na-arụ ọrụ fọrọ nke nta kpamkpam na ndabere
Ntọlite ​​bụ pụtara dị mfe na ọtụtụ ọrụ na gbanye mgbọrọgwụ igwe kwesịrị enweghị nsogbu n'ịgbanwe ntọala
Ọ bụ a ikpe ngwa
Nkowasi: Ọ bụ ezie na a na ngwa bụ ezi nhọrọ, aha bụ dịtụ etịbe. The menu dị mfe iji, na navigating site na njirimara dị iche iche bụ nnọọ mfe. Ma, e nwere ihe ọ bula i nwere ike ime na a na ngwa na nanị otu mgbata!
Mfe nghọta UI
Nnọọ ngwa ngwa na oru oma
Nhọrọ maka ihicha oku na ndekọ
Cons: UI bụghị emelitere-Android 4.0 ọkọlọtọ
6. Ọkara ebe nchekwa & Cache Cleaner
Nkowasi: Site ndị mara kasị mma maka nche na antivirus ngwa, na-abịa a ohuru cache mezie ngwa na-bụ nnọọ dị ka nhọrọ ọ bụla ime na nke a ndepụta. The ngwa dị mfe, ngwa ngwa na ihe ijuanya na ìhè. Echere m na ọ bụ ọsọ nke a na ngwa na n'ezie ka ọ dị iche karịa ihe ọ bụla ọzọ. Si dị gị ọdịda peeji na ngwa ọ dị mfe ihichapu gị oku na ederede akụkọ ihe mere eme, nchọgharị akụkọ ihe mere, na N'ezie gị cache.
Uru: Secure na mma-iji.
Cons: Limited ihicha atụmatụ.
Nwere ike ikwu kpakpando: 4.5 Description: Ndenye Cleaner ọcha niile cache na akụkọ na adị na ekwentị gị na-ebuli ya ịrụ ọrụ. Na-esonụ atụmatụ n'ezie, ọ bụ otu n'ime mma ngwa gburugburu.
Ọcha Cache: Hichaa cache gị niile ngwa ọdịnala na nanị otu otu mgbata.
Ọcha Akụkọ: ọcha clipboard, nchọgharị akụkọ ihe mere eme, Google Play ụlọ ahịa search akụkọ ihe mere eme, Gtalk search akụkọ ihe mere eme wdg
ọcha Oku dekọọ: ọcha niile / abata / oku / Agbaghara oku na ndekọ .
Clean SMS: Clean ozi na otu ma ọ bụ kọntaktị niile.
Nice interface imewe
Mfe iji na kensinammuo
Emepụta a nkwado ndabere akwụkwọ nke Registry
Ị nwere ike tinye ọhụrụ ngwa ihicha ndepụta.
8. Ike Clean
Nwere ike ikwu kpakpando: 4.4
Nkowasi: Ọ na-enyere melite arụmọrụ na gị android ngwaọrụ. Ọ nwere ike na ọcha mmapụta faịlụ ekpe si ngwa, nwere ebe nchekwa booster, nwere ike ijikwa ngwa gbakwunyere na-zuru ezu ngwaọrụ ozi dị ka nchekwa, Ram na CPU ọsọ. Ọ bụ ngwa ngwa na mfe iji.
Dozie dashboard nke dị oké mkpa usoro stats
Mfe iji Cleaner atụmatụ
Zuru ezu ngwaọrụ stats
Extra atụmatụ dị ka Nzuzo Manager na dị iche iche ngosi ụdị
Ebe nchekwa booster nwere ike gaghị adị mkpa ka kasị Android ngwaọrụ
A ole na ole ndị na-eli n'ime ndị ọzọ na atụmatụ
9. 360 Nche
Nkowasi: 360 Nche bụ ụlọ nke ngwaọrụ ahụ na-agụnye ihe antivirus na ndị ọzọ na smart ekwentị boosting ngwọta maka Android smart igwe. Na-ekwu na ọ na-kwajuru na atụmatụ ga-ihe ekwesighi.
"Switzerland Army Knife" nke nche na njikarịcha ngwaọrụ
Kwajuru na atụmatụ
Personal abụọ na ebe nchekwa ihicha.
N'ihi na 10th superstructures
Nkowasi: SuperBox Pro bụ a 10 na-na-1, 'Switzerland agha mma' nke bara uru ngwaọrụ. Ọ na-agụnye: ebe nchekwa na CPU Manager, Battery ileba anya, Installer, Uninstaller, ngwa SD kaadị transfer (Apps2SD), Cache Cleaner, Task egbu egbu, Ntọala, File Manager na n'ikpeazụ a Chebe ọrụ nke na-ekpebi ihe ize ndụ etoju nke ụfọdụ ngwa.
10 dị iche iche na ọrụ na 1 mfe ngwa
Mfe iji na ịnyagharịa
ngwa SD gbapụta mma bụ n'ezie bara uru
Responsive na ngwa ngwa iji
Akụkụ ma a batrị na a ọrụ egbu egbu wijetị cons:
Oké ọnụ na-atụle e nwere ihe ad version ke gam akporo Market
The interface bụ ikekwe a obere dere-na-achọ, mgbe nke a adịghị ekwu si arụmọrụ
> Resource> Clean-elu> 10 Best ekwentị Clean égwu